နိုင်ငံနှင့်ဒေသ ၄၆ ခုမှ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသော ခရီးသွားများ (q)ဝင်ရန်မလိုဘဲ ထိုင်းနိုင်ငံက ပြည်ဝင်ခွင့်ပြုတော့မည် - Xinhua News Agency
ဘန်ကောက် ၊ အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ရောဂါကူးစက်မှုအန္တရာယ်နည်းပါးသည့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံနှင့် ဒေသပေါင်း ၄၆ ခုမှ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံထားပြီးသော ခရီးသွားဧည့်သည်များကို နိုဝင်ဘာလမှ စတင်ကာ ကွာရန်တင်း(q) ဝင်ရန်မလိုဘဲ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံက ကြာသပတေးနေ့နှောင်းပိုင်းတွင် ကြေညာခဲ့သည်။တရုတ် ၊ အမေရိကန် ၊ ဗြိတိန် နှင့် မလေးရှား အပါအဝင် ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုသော နိုင်ငံစာရင်းကို ထိုင်းနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန(MFA)က ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၃၁ ရက်က ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုခံယူနေသော ထိုင်းရဟန်းတော်များအားတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ထိုင်းနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍဖြင့် ၎င်း၏ နိုင်ငံ့စီးပွားရေးကို ပြန်လည်မြှင့်တင်ရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေသည်။ COVID-19 ရောဂါမစတင်မီ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ စုစုပေါင်းအသားတင်ထုတ်ကုန်တန်ဖိုး(GDP)သည် ခရီးသွားကဏ္ဍမှ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ဝင်ငွေရရှိနေခဲ့ရာ ကပ်ရောဂါရိုက်ခတ်မှုကြောင့် ပြင်းစွာ ထိခိုက်ခံစားခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
BANGKOK, Oct. 21 (Xinhua) — Thailand announced late Thursday that it will allow vaccinated visitors from 46 low-risk countries and regions to enter Thailand without quarantine from November.
The list, which includes China, the United States, Britain and Malaysia, was released by Thailand’s Ministry of Foreign Affairs (MFA).
Thailand is beefing up efforts to revive its economy as the tourism sector, the main growth engine that contributed roughly 20 percent of the country’s GDP before COVID-19, has been hit hard by the pandemic. Enditem
Photos- Thai Buddhists receivesadose of the COVID-19 vaccine in Bangkok, Thailand, on July 31, 2021.